Chii Energy kupora ventilator?
Energy kupora kufefetedza (BSN) ndiye simba nokupora basa kupanana simba iri kazhinji aneta kuvaka kana nzvimbo mhepo uye kuishandisa kurapa (precondition) huri kuuya panze kufefetedza mhepo dzinogarwa uye vezvokutengeserana HVAC enyika. Panguva mwaka inodziya, gadziriro kwerubwinyo rwakagara rwuripo inotonhodza uye dehumidifies apo humidifying uye pre-kudziyisa panguva kutonhora. Kubatsira kushandisa simba kupora kukwanisa kusangana ASHRAE kufefetedza & simba mitemo, apo nani indoor mhepo yepamusoro uye kuderedza zvachose HVAC michina chinzvimbo.
In shoko, Energy Recovery Ventilator (BSN) anobvumira mhepo yakachena mugomba chivakwa, apo ukaramba pre-vakaumbwa kudziyisa kana kutonhora.
Ndeipi muenzaniso kurondedzerwa?
Note: Installation mhando
Yakaturikwa mhando, L-Floor mhando
XHBQ-D10TH zvinoreva yakaturikwa mhando BSN pamwe zvachose kupisa exchanger, TH series, mhepo gave ow pamusoro 1000m3 / h, 3 aimhanya.
How kusarudza AHU?
Holtop AHU zvakagadzirirwa uye vakasarudzwa maererano-software nenyanzvi, ichipa vanoshandisa vane musoro, zvoupfumi, uye mazano mhepo kutonhodza anoshanda. The zvaiitwa Holtop AHU kusarudzwa Software zvinosanganisirawo:
Sound chirongwa uye AHU mubvunzo utariri
Zvinonyatsochengeta wokufema uye chikwata chikamu kupesana
Multiple kupisa kupora kusarudza uye dzichipfekeka chikamu mubatanidzwa
Mhepo wehurumende pfungwa kukarukureta musoro zvikamu
Various uchida zvikamu
k Zvichienderana chikwata mubatanidzwa
L Professional uye hwakadzama vakasarudzwa anoshuma goho
Unoona Bayirai AHU Design Service?
Kugadzira chirongwa yako uchishandisa Holtop Air Handling zviumbu
Holtop AHUs dzinobva zvachose modular design, anokwanisa achichinja kuita zvinodiwa dzakasiyana-siyana naro marudzi, uye vakava nokubhadhara ngwariro chaiyo simba kunyatsoshanda. Tapota anonyatsotsanangura basa rako uye zvinodiwa zvakawanda zvaunogona kuitira tinogona kuita panyaya kwamuri nokukurumidza sezvinobvira.